Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra tamin’ny Oktobra 2010
Febroary 2020 39 Lahatsoratra
Mpanoratra Rezwan · Amerika Latina
Uruguay’s national OLPC project Plan Ceibal provided an XO ($100 laptop) to each of the 395,000 children in primary school from 1st to 6th grade across the country’s 2332 public schools. The Plan Ceibal ranked well in several evaluations and has become a success story to be replicated in other...
26 Oktobra 2010
Mpanoratra Gilad Lotan · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Mpanoratra Clotilde Castillo · Amerika Latina
[Horonantsary] Tafatafa iarahana amin'i Olzod Boum-Yalagch avy ao amin'ny Nomad Green
Mpanoratra Eddie Avila ·
Olzod Boum-Yalagch dia mpanolo-tsaina ofisialin'ny Nomad Green, ilay tetikasa Mongoliana momba fanaovan-gazetin'olon-tsotra, miorina any an-drenivohitra Ulaanbaatar. Ao amin'io horonantsary io, miresaka i Mr. Boum momba ny fanampian'ny fanaovan-gazetin'olon-tsotra amin'ny fampahatsiarovan-tena ny olona, ary mazava ho azy hitondra any amin'ny vahaolana ho an'ny fahasimbàn'ny tontolo iainana any amin'ny firenena.
25 Oktobra 2010
24 Oktobra 2010
Mpanoratra Haifa Alrasheed · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
Voarakitra horonantsary ny herisetran'ny mpitandro filaminana manerana ny tany. Indro misy iray avy any Koety izay navoaka tao amin'ny blaogy fanta-daza iray ary nahazo fanehoan-kevitra maro dia maro – ny ankamaroan'izany dia manameloka ilay mpitoraka blaogy noho ny namoahany izany. Mark, avy amin'ny 248am, dia namoaka ity horonantsary manaraka ity: Manoratra...
23 Oktobra 2010
Rosia: Lahatsary vaovao avy amin'ny mpiady anaty akata Primorsky Krai
Mpanoratra Masha Egupova · Eoropa Afovoany & Atsinanana
Mitohy ny tantaran'ireo andia-mpamono polisy any amin'ny faritra atsinanana indrindra any Rosia, manadihady ny votoaty vaovao indray i Masha Egupova.